हिजो काठमाडौंमा भयानक हुरीबतासका कारण जनजीवनमा प्र’भावित !:: Mero Desh
हिजो काठमाडौंमा भयानक हुरीबतासका कारण जनजीवनमा प्र’भावित !
Published on: ३ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०२:४६
काठमाडौंमाभयानक हुरीबतासका का’रण जनजीवनमा प्र’भावित ! राजधानीमा बिहीबार राति भयानक हावाहुरी आएको छ राति ९ बजेदेखि हावाहुरी चलेको हो हा’वाहुरी बाट के कति क्षति भयो भन्नेबारे जानकारी प्राप्त भएको छैन । कतिपय यात्रामा भएका अ’थवा घर’बाहिर भएका हरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।
देशको द’क्षिण प’श्चिमबाट मेघ गर्जन र च’ट्याङ सहित वर्षा गराउने बादल विकसित भई रहेको र उक्त प्र’णाली उत्तरपूर्व तिर सर्ने क्र’ममा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानु मान महाशाखाले जनाएको छ हुरीले राजधानीको अधि कांश स्थानमा बिजुली गएकाे समाचार छ । काठमाडौं उप त्यकामा यतिबेला श’क्तिशाली हावाहुरी चलेको छ। उपत्य काका प्रायःजसो स्थानमा हावाहुरी चलेको छ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा उ’पत्यकाका विभिन्न स्थानमा बस्नेहरुले हावाहुरी चलेको उल्लेख गर्दै स्टाटस लेखेका छन्। राति ९ बजेपछि हावाहुरी चलेको हो। केही स्थानमा वर्षासमेत भइरहेको छ। मेघगर्जनसमेत भइरहेको छ। वित ग केही दिनयता काठमाडौंमा देखिएको वायु प्र’दूषण वर्षा पछि कम हुने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष काठमाडौं लगायत देशभरको वायु प्र’दूषण जोखिमको बिन्दुमा पुगे को छ।
यो पनि पढ्नु होस ! काठमाडौँ — बिहीबार राति देशैभर ठूलो हावाहुरी चलेको छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महा शाखाकी व’रिष्ठ मौसमविद् प्र’तिभा मानन्धरले अहिले मुलुकका अधिकांश भागमा हावाहुरी चलेको कान्तिपुरसँग को कुराकानीमा बताइन् । मौसमविद् मानन्धरका अनुसार प्रि–मनसुन अवधिका क्रममै अहिले हावाहुरी चलेको हो ।
उनका अनुसार अझै एक/दुई घ’ण्टासम्म हावाहुरी चल्ने छ । ‘यो हावाहुरी प्रि-मनसुन एक्टिभिटीअन्तर्गत नै चलेको हो । अझै एक/दुई घ’ण्टा हावाहुरी चल्नेछ, वर्षा भएपछि यो विस्तारै घट्दै जान्छ,’ मौसमविद् मानन्धरले भनिन् ।उनले शुक्रबार अपरान्ह पनि देशका केही भागमा हावाहुरी चल्ने बताइन् ।भोलि पनि अपरान्हपछि यस्तै हावाहुरी चल्नेछ
तर ठूलो चल्दैन,’ उनले भनिन् । अहिले प्र’देश १, वाग्मती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पहाडी भूभागमा पनि हावाहुरी चलेको पनि उनले बताइन् । स्थानीयस्तरमै नि’र्माण वायु दक्षिणबाट विस्तारै उत्तरपूर्वतिर जाने पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै विभागले हावाहुरीका का’रण घरका छाना उडाउने, रुख भाँचिने लगायतका दु’र्घटना निम्तिन सक्ने भन्दै स’र्वसा धारणलाई बाहिर ननिस्कन आ’ग्रह गरेको छ ।